ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ဆန်ချိုကို ခေါ်ဖို့ သတင်းကြိုထွက်လာတဲ့ ယူနိုက်တက် နဲ့အတူ အခြားသောနံနက်ခင်းသတင်းတိုများ ….
၁။ မီထရိုဂလူးကို ခေါ်ဖို့ ချိန်ရွယ်နေတဲ့ PSV နယ်သာလန်ကလပ် PSV အသင်းဟာ ဂရိတိုက်စစ်မှူး မီထရိုဂလူးကို အငှားနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ မာဆေးလ်အသင်းရဲ့ ဒီတိုက်စစ်မှူးဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဂါလာတာစာရေးအသင်းကို အငှားနဲ့ သွားရောက်ကစားနေပေမယ့် နှစ်သင်းလုံးဘက်က […]
ဆွာရက်ဇ်ကို ဂျူဗင်တပ်စ်ဆီထိုးရောင်းဖို့ ကြံစည်ခဲ့သေးတဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ အခြားသောနေ့လယ်ခင်းသတင်းတိုများ ….
၁။ ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတဲ့ ဒမ်ဘီလီ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဒမ်ဘီလီအနေနဲ့ အသင်းမှာသာ ဆက်ရှိနေမယ်လို့ ကစားသမားရဲ့ အေးဂျင့်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၂၂) နှစ်အရွယ် ပြင်သစ်တောင်ပံကစားသမားဟာ ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းများစွာရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိထားပြီး ဒဏ်ရာပြဿနာများနဲ့ မကြာခဏ […]
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ခင်းအတွက် နောက်ဆုံးရ သတင်းတိုများ လာပါပြီခင်ဗျာ ….
၁။ (၁၆) နှစ်အရွယ် ကြယ်ပွင့်ကို အပြိုင်အဆိုင် စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ အင်္ဂလန် ထိပ်သီး (၃) သင်း မန်စီးတီး၊ အာဆင်နယ် နဲ့ စပါးအသင်းတို့ဟာ ရန်းနက်စ်အသင်းရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကြယ်ပွင့် အက်ဒွါဒို ကာမာဗင်ဂါကို ခေါ်ယူဖို့ […]